www.xamarcade.com » Xiriirkii u Dhaxeeyay Somalia iyo Imaaraatka oo sii xumaaday iyo Xog ku aadan waxa la isku heesto
Xiriirkii u Dhaxeeyay Somalia iyo Imaaraatka oo sii xumaaday iyo Xog ku aadan waxa la isku heesto
By xamarcade On: 05 Mar, 2017 In: Madadaalo
Waxaa sii xumaanaya xariirka u dhaxeeyay Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabata,
waxa ayna arintaasi keentay in Safriikii Dowlada Imaaraatka u fadhiyay magaalada Muqdisho si deg deg ah looga yeeray dalkiisa kuna laabtay.
Dowlada Imaaraatka Carabta ayaa ka carootay go’aanka ay Dowlada Federaalka Soomaaliya uga soo horjeesatay in saldhiga Milatari ay ka dhigato garoonka Diyaaradaha magaalada Berbera, waxa ayna horey saldhigaasi ugala heshiisay Maamulka Somaliland.
Dowlada Imaaraatka Carabta ayaa la sheegay in si deg deg ah ugu yeertay Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Danjire Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi, waxa uuna safiirka ku laabtay magaalada Abuu Dubai.
Dowlada Cusub ee Soomaaliya ayaa u muuqata mid aan raali ka aheyn qorshaha ay Dowlada Imaaraatka Carabta saldhiga uga dhiganeyso magaalada Berbera, waxa ayna Madaxda dowlada sheegeen in Somaliland ay tahay dhul Soomaaliya kamid ah .
Xariirka Dowlada Soomaaliya kala dhaxeeyay Imaarataka ayaa mudooyinkii dambe ahaa mid sii xumaanayay, Dowlada Imaaraatka oo taageero badan siisa Dowlada ayaa lasoo baxday dhaqamo cusub oo wax u dhimaya Madax bananaida iyo jiritaanka dowlada Soomaaliya.
Dowlada Imaaraatka ayaa heshiis kula gashay Maamulka Somaliland in saldhig ciidan ka dhigato Garoonka Diyaardaha magaalada Berbera, waxaana heshiiskaasi Somaliland ku heshay dhaqaale badan
One response to “Xiriirkii u Dhaxeeyay Somalia iyo Imaaraatka oo sii xumaaday iyo Xog ku aadan waxa la isku heesto”
Abdulrahman M. Omar says:
Viva MADAXWEYNE Farmajo N ooloow baan leenahay.
Arrinka Somalia iyo Somaliland waa arrin innaga innoo yaalla faragelin shisheeye waa innaanad u ogolaan haba yaraatee.
Somalia noplaato SOMALILANDNA hajirtoo ha joogto